Mavericks Kubasa: Ndiani Ari Kubhadhara? | Martech Zone
Muvhuro, Zvita 18, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Mwedzi wapera Indianapolis Marketing Book Club yakasarudza Mavericks kuKushanda sebhuku rekuverenga. Ini ndinoda mabhuku, uye kunyanya ndinoda mabhuku ebhizinesi. Imba yangu yakazara navo. Ndiri kuverenga iyi uye ndichangotanga Usatombodya wega: Uye Zvimwe Zvakavanzika Zvekubudirira, Hukama Humwe Panguva.
Mavericks paKushanda ndeimwe yeaya anonyanya kukurudzira mabhuku, asi ini handina chokwadi chekuti ndiri kuwana 'kuzadza' kwavo kana kwete. Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin, uye kunyange shamwari dzangu nemhuri vanogara vachindiudza kuti ndive Maverick.
Ini ndiri Maverick pamoyo, asi ini handina chokwadi chekuti nyika inoda maverick mazhinji. Isu tinodaro here?
Maverick: anoramba ega, semunhu akangwara, muimbi, kana wezvematongerwo enyika, anotora chinomira chakazvimiririra kunze kwevaanoshamwaridzana navo.
Mushure mezvose, hatidi here vakomana vari kungo gadzira mota dzedu, kutsvaira pasi, kuchengetedza mabhazi kumhanya, uye kutarisa chitoro? Ko bhizinesi rega rega rinogona here kukwanisa kuramba richikurudzira Mavericks? Hazvirevi kuti ndine kusahadzika nezve mweya wangu wekuita bhizimusi, ndinongova nekusahadzika kuti kune mikana yakawanda yeMavericks kunze uko.
Shamwari yangu yakanaka yakabvunza kuti ndinoda bhuku racho sei. Ndakapindura kuti, “Bhuku racho ndinorida!”
Ipapo ndaifanira kudzokera kubasa. Hazvirevi kuti basa rangu haritenderi kuti ndive nesimba… zvakangoita izvozvo bhizinesi rese hazvireve kuti vanokoshesa maverick ari pabasa. Ivo ndivo vasiri-vanotevedzera, vekunze, vanonetsa. Kazhinji, ndinofunga ndiMaverick anopedzisira atsvaga anotevera mukana - nekuti hakuna kwavakambo siya.
Ndiri kukanganisa pane izvi here?
Zvita 18, 2006 na2:29 PM
Ndinofunga kuti vanhu vanogona kuzvimiririra mune zvese zvavanoita. Handifungi kuti tinogona kuva nevanhu vakawanda vanorega kuita zvinhu nemhaka yokuti “ndizvo zvavari” uye panzvimbo pacho vanobvunza mibvunzo, vosarudza kupesana nezviyo, uye somugumisiro, tovandudza nyika yakatipoteredza.
Jan 26, 2007 na10:14 PM
Ini ndinobvuma, ndosaka tine Jessie James anovaka midhudhudhu, Orange County Choppers, anovaka midhudhudhu. Uye vanhu vose vachavaitira basa rechibvumirano. Unofunga kuti vanhu vese ava vanoenderana here, tamba wakachengeteka muhupenyu. iyi mienzaniso. Ini ndiri munhu asingawirirane. Ini ndiri murungu wechikadzi wekuAmerica akaenda kuchikoro cheacupuncture. yaive yakareba 3 years. uye handisi weAsia. Ndingati ndiko kuve munhu asiri conformists. Tinoda chaizvo vamwe vasiri-conformists
Zvita 18, 2006 na8:28 PM
Handipokane uye handinditore nenzira isiri iyo, uye haina kukosha kupfuura imwe. Ini ndinotenda kuti timu hombe inoda 'vanosimudza nemapusher'. Avo vanozvifunga uye avo vanogona kuita pachirongwa ichocho.
Ini ndinongoshamisika kuti mangani mavericks iyo indasitiri inogona kubata uye kana paine chaizvo kushomeka kwavo!
Zvita 18, 2006 na10:30 PM
Ini ndanga ndichifunga izvi zvakare, asi ndakaona - munhu wese anogona kuva Maverick dzimwe nguva, uye 'anosimudza nekusundira' dzimwe nguva (kunyangwe zvichida kuruma rurimi rwavo). Hazvingave zvakanaka kana munhu wese akakurudzira kuita zvese nenzira nyowani nguva dzese. Asi ini ndinofunga pane nzvimbo yekuti munhu wese abvunze mibvunzo inoda kubvunza, kunyanya "nei?". Uye muchiitiko changu, mubvunzo uyu unobvunzwa zvakanyanya kashoma.
Ndinobvumirana. Tinofanira kuva nevanhu vanosundira mazano matsva uye kurota izvo zvingave. Zvakatonyanya kukosha, tinoda vanhu vanogona kutarisa pakuita izvo zvinodikanwa kutakura gwara idzva kumberi.
Pane nguva nenzvimbo yezvose zviri zviviri. Kumira kunoitika kana pasina mazano matsva ari kupihwa. Nekudaro, kumira kunogona kuitika zvakare kana pfungwa dzakawandisa dzikakandwa mumusanganiswa uye hapana anoda kushanda nemazano emumwe munhu.